करीना कपूर खान एयरपोर्टको सल्वर सूटमा स्पटेड - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
करीना कपूर खानको पछिल्लो सलवार सूट एयरपोर्ट लुक अनियन्त्रित रूपमा मार्नको लागि यो एक पाठ हो
घर फेसन बलिउड अलमारी बलिउड वार्डरोब देविका त्रिपाठी द्वारा देविका त्रिपाठी | सेप्टेम्बर २,, २०१ on मा
करीना कपूर खानको एयरपोर्ट फेसन भाषा यति अनौंठो छ। मुख्य कुरा के हो भने जब उनी एयर्पोर्टमा भेटिन्छन्, उनी सहज देखिन्छिन्। डिभा एकदम प्राकृतिक देखिन्छ र अचम्मको लागी कडा कोशिस गर्दैन। तपाईले करीनालाई नक्कली पोशाक वा वाइब्रन्ट प्यान्टमा भेट्नुहुने थिएन। यसको ठीक विपरीत उडता पंजाब अभिनेत्री सबैभन्दा साधारण आउटफिटमा देखिन्छ। यसका साथै कहिलेकाँही फ्लेरड डेनिम र लूज शर्टको अलावा करीना कपूरले पनि एयरपोर्टमा सलवार सुटलाई डान्स गर्छिन्। हालसालै, डिवाले एक सलवार सूट दान गर्‍यो, जसले हामीलाई उनको एयरपोर्ट सलवार कमीज फेसन पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्‍यो।
अब, जब सलवार सूटको कुरा आउँदछ, उनी सजिलैसँग त्यस्तो चीजको लागि विकल्प लिउँदिनन् जुन उनको कक्षामा छुट्टिनेछ। हाम्रो लागि, उनको सलवार सूट फेशन अधिक मुड द्वारा संचालित देखिन्छ। उदाहरणका लागि, उनको भर्खरको परम्परागत सूट लिनुहोस्, यो कुर्ता र बोटमहरूको पूर्ण-सिnch्क्रोनाइज गरिएको जोडी जस्तो देखिँदैन र अझै पनि, उनको पोशाक स्थानमा खसे र करीना कपूर खान सधैं जस्तो सुन्दर देखिन्थ्यो। अभिनेत्री ग्रेले टुसाले बन्यो। उसको कुर्ता र दुपट्टा हरियो र h्गले जोडिएको थियो र उसको पालाजो प्यान्ट खैरो रue्गमा डुबाईएको थियो र म्याजेन्टा पुष्प लहरासँग सजिलो थियो। उनी जटिल कोल्हापुरी सैंडल लगाउँछिन्। मेकअपलाई गुलाबी ओठको छायाको साथ मौंन गरिएको थियो र केश त्रुटिहीन थियो। उनले आफ्नो अनुहारलाई कालो छायाँमा बेर्छिन्।
केहि महिना अघि काटिएकी, करीना कपूरले हामीलाई पोल्का डटेड सूटको साथ चकित पारे जुन गूड अर्थको लेबलबाट आएको हुन्थ्यो र तपाईको लागत 000००० भन्दा कम हुन्थ्यो। त्यसोभए, यस हस्तिहाडको पेड सूट पोल्का डटेड थियो र उनले यसलाई सेतो ट्राउजर र खैरो डुप्ट्टासँग टिमेट गरिदिए जसलाई आकस्मिक रूपले ढाकिन्थ्यो। उनले ठाडो हुप्सको साथ आफ्नो लुकमा पहुँच पुर्‍याई र फेरि कोल्हापुरी स्यान्डल स्पोर्ट गरिन्। मेकअप चम्किलो गुलाबी लिप शेडले हाईलाइट गरिएको थियो र सफा बनले उनको अवतार माथि उठायो। उनले फेरि ठूलो शेडको साथ आफ्नो हेराई पूरा गरे।
एयरपोर्टमा उनको सलवार सूटसँग, करीनाले हामीलाई देखाउँछन् कि उनी कति सजीलो मार्छिन्। अभिनेत्रीले यो पनि प्रमाणित गर्‍यो कि तपाइँ जुनसुकै पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँको दृश्यलाई तान्नको लागि आत्मविश्वासको सहि मात्रा चाहिन्छ। त्यसो भए तपाईको बारेमा के सोच्नुहुन्छ करीना कपूर खान सलवार सूट शैली? के तपाई प्रेरित हुनुहुन्छ? हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि टिप्पणी सेक्सनमा।
हस्तमैथुनबाट कसरी छुटकारा पाउने
आलिया भट्ट वजन घटाउने आहार चार्ट
शनि जयन्तीमा के गर्ने
सजिलो पफ हेयरस्टाइल चरण-देखि-चरण
टमाटर अनुहारमा लगाउने फाइदाहरू